पेट केयर - नारी
घरपालुवा कछुवाको रेखदेख
घरपालुवाका रूपमा अहिले कछुवा पाल्ने चलन निकै बढेको छ । अरूभन्दा फरक प्रकारको घरपालुवा हो कछुवा । कछुवा पृथ्वीमा करिब १० करोड वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको अनुमान छ । यो सबैभन्दा बढी बाँच्ने जनावर पनि हो ।घरपालुवा कछुवा विभिन्न थरिका हुन्छन् जस्तै सुल्काटा, रेडफुट, एलो फुट, ग्रिक, रसियन, हरमन तथा इन्डियन स्टार । कछुवा पाल्नुअघि यसका प्रजातिका बारेमा जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ । कछुवा ३० देखि १ सय वर्षसम्म बाँच्ने हुँदा धेरै कुरा विचार गरेर मात्र यसलाई घरमा ल्याउनुपर्छ ।कछुवाको आहाराकछुवाको खाना पनि त्यसको प्रजातिमा निर्भर गर्छ । कछुवा ८० प्रतिशतभन्दा बढी सागसब्जी तथा फलफूलमा निर्भर हुन्छ । यसलाई बजारको तयारी खानासमेत दिन सकिन्छ जसमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन तथा मिनरल हुन्छ । क्याल्सियम तथा भिटामिन घरको खाना (सागपात) मा मिसाएर खुवाउन सकिन्छ । कछुवामा लाग्न सक्ने रोगहरूघरपालुवा कछुवामा प्रायः भिटामिन एको कमी, फोक्सोसम्बन्धी रोग तथा सेल भाँचिने समस्या देखा पर्छ । भिटामिन एको कमीले इपिडर्मिस (सेलको बाहिरी परत) मा परिवर्तन आउँछ । सुख्खापन तथा परत निस्किनु त्यसको प्रमुख लक्षण हो । कछुवामा भिटामिन एको कमी हुँदा खाना नखाने, सुस्त हुने, आँखा सुन्निने आदि समस्या देखा पर्छ । श्वासप्रश्वासको संक्रमण ब्याक्टेरियाले हुन्छ जसमा भिटामिनको कमीले समेत सहयोग पुर्‍याउँछ । नाकबाट सिंगान बग्नु, आँखामा कचेरा लाग्नु, खाना नखानु, मुख खोलेरै श्वास लिनु त्यसको प्रमुख लक्षण हो । कछुवाको सेल (बाहिर कवच) फुट्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यसबाट जोगाउन कछुवालाई जमिनमाथि टेबल तथा अन्य उचाइमा राख्नु हुँदैन । बालबालिकाहरूले बोक्दा, खेल्दा ध्यान दिनु तथा सम्भावित अरु खतरा हुने ठाउँमा जान नदिनु नै उत्तम उपाय हो ।बिरामी कछुवाको पहिचानखाना नखाने, आँखामा संक्रमण हुने, राम्रोसँग श्वास लिन नसक्ने, हिँडडुल नगर्ने, शरीरमा मासु पलाउन, खोलका परतहरू निस्कने आदि समस्यामा जतिसक्दो चाँडो पशुचिकित्सकको सल्लाहमा उपचार गराई कछुवालाई निरोगी बनाउन सकिन्छ ।एडभान्सड पेट हस्पिटल, विशालनगर
डा. शरद सिंह यादव, फाल्गुन २९, २०७५
एक्वेरियमका माछाको रेखदेख
एक्वेरियमको पानी दिनहुँ फेर्नुु हुँदैन । यस गर्दा माछा मर्न सक्छन्, यदि एक्वेरियममा फिल्टर सिस्टम छैन भने दिनहुँ १०–२० प्रतिशत पानी मात्र फेर्नुपर्छ भने फिल्टरमा एकपटकमा ३०–३५ प्रतिशत पानी फेर्नुपर्ने हुन्छ । पानीमा भएका ब्याक्टेरियाले माछा बचाउन सहयोग गर्छ ।
डा. शरद सिंह यादव, पुस २, २०७५
प्राय:जसो कुकुर खानाको मामिलामा लोभी नै मानिन्छन् । अनुसन्धानले पनि के देखाएको छ भने जसरी जंगलबाट यिनीहरू घरपालुवाका रूपमा मानिसको विश्वासिलो साथी बन्न पुगे त्यसैगरी यिनीहरू आफ्ना घर धनीसँग खाना माग्न र धेरै खानाको आशा गर्न सिपालु भए । यद्यपि समस्या तब सिर्जना हुन्छ जब हाम्रो घरपालुवाले सामान्यभन्दा बढी खान थाल्छ अथवा जति दिए पनि नपुग्ने हुन्छ ।
डा. शरद सिंह यादव, श्रावण १३, २०७५
डा. शरद सिंह यादव, असार २१, २०७५
डा. शरद सिंह यादव, असार १३, २०७५
- सूर्य उदाउनुअघि घरपालुवा पशुलाई शारीरिक अभ्यास गराउनुपर्छ ।- स्वच्छ एवं सफा खानेपानी चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्छ ।
नारी संवाददाता , वैशाख २६, २०७५
घरपालुवाका आपत्कालीन समस्या
घरपालुवाको श्वासप्रश्वासमा समस्या भए समयमै उपचार गराउनु आवश्यक छ । यसको कारण छिटोछिटो सास फेर्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु, निमोनिया, मुटुसम्बन्धी समस्या, मुटुमा जुका, रगतको कमी आदि हुनसक्छन् ।
डा.शरद सिंह यादव, चैत्र २१, २०७४
मानिसको प्रिय साथी
घरमा कोही छ उसलाई ख्वाउनुपर्छ, जिम्मेवारी छ भनेर घरपालुवा जनावर पाल्नेहरू पनि छन् । यद्यपि धेरैले साथीका रूपमा कुकुर नै पाल्छन् किनभने कुकुर घरको सुरक्षामा समेत सहायक हुन्छ ।
सिर्जना दुवाल श्रेष्ठ, माघ २१, २०७४
डा.शरद सिंह यादव, पुस २४, २०७४
घरपालुवालाई कसरी नुहाइदिने ?
- घरपालुवालाई धेरै नुहाइदिनु हुँदैन । महिनाको एक पटक नुहाइदिए पुग्छ ।- नुहाइदिँदा जहिले पनि कानमा कपासको डल्लो राख्नुपर्छ, जसबाट कानमा पानी पस्न पाउँदैन ।
डा.शरदसिंह यादव, पुस १२, २०७४
- घरपालुवा कुकुरको छाउरा–छाउरी कम्तीमा ४५ दिनको हुनुपर्छ ।- आँखाबाट कचेरा र नाकबाट सिँगान बगेको हुनु हुँदैन ।
नारी संवाददाता , मंसिर २१, २०७४